Tababbarka Taksi-dalxiis oo saaxiibtinimo oo ka billowday Kayseri | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriTababbarka Taksiga Dalxiisayaasha Dalxiis ee Dalxiis ayaa laga bilaabay Kayseri
21 / 11 / 2019 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
tababar taksi oo dalxiis loo adeegsado ayaa ka bilaabmay kayseride
Erciyes A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri. iyo barnaamijka tababbarka Dalxiiska ee Dostu ee Dalxiis Başla wuxuu ka bilaabay qaab dhismeedka borotokoolka ay wada saxiixdeen Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska iyo Rugta Wadayaasha.
Erciyes A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri. iyo barnaamijka tababarka 'Dalxiiska' Friendly Friendly Taxi eğitim 'wuxuu ka bilaabay qaab dhismeedka borotokoolka ay kala saxiixdeen Agaasinka Dhaqanka iyo Dalxiiska Gobolka iyo Rugta Wadayaasha. Dukaanadeeyayaasha tagaasida '100' ayaa ka qeybqaatey barnaamijka tababarka kaas oo ka bilaabay Hoolka Golaha ee Dowlada Hoose.
Isaga oo ka hadlaya furitaanka barnaamijka tababarka 'Dostu Tourist Friendly Taxi', Erciyes A.Ş. Gudoomiyaha Gudiga Murat Cahid Cıngı, Kayseri wuxuu bilaabay inuu noqdo magaalo dalxiis, ayuu yidhi. Isagoo sheegay in dalxiisayaashu ay Kayseri ula imaanayaan duullimaadyo toos ah, Cıngı wuxuu yidhi, “Dalxiiska waa waax aad u muhiim ah oo taageera horumarka gobolka. Dalkeenu wuxuu noqday dal dalxiis oo adduunka oo dhan ah. Waxaan nahay dalka 6 oo leh tirada ugu badan ee dalxiisayaasha adduunka. Erciyes wuxuu noqday mid ka mid xarumaha xarumaha dalxiiska adduunka ugu maalgashiga maalgashiga ee Degmadeenna Magaalo Weyn. Marxaladan waxaan horay ugu socona si aan ugu fiicnaano hoyga, maqaayadaha, wareejinta iyo adeegyada gaadiidka. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan sare u qaadno waxqabadkaaga dalxiiska magaaladeena. Kayseri, 5-10 waxay joogi doontaa meel aad u kala duwan sanado kadib. 5 20-30 kun oo dalxiisayaal ah ayaa booqan doona magaaladan waqti isku mid ah sanadka ka dib. Marka tan la eego, waxaan rabnaa in nalagu qabto diyaar-garow la'aan ”.
Agaasimaha Dhaqanka iyo Dalxiiska Gobolka Şükrü Dursun wuxuu adkeeyay muhiimadda aragtida koowaad. Dursun wuxuu caddeeyay in darawallada tagaasida ay noqon doonaan dadkii ugu horreeyay ee la kulma dalxiiska. Dareenkan, waxaan rabnaa inaad ogaato waxyaabaha sare ee qiimaha dalxiiska ee Kayseri markii ugu horeysay ..
Cali Ates, Madaxweynaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida, ayaa sheegay in darawal kasta oo taksi uu ahaa hage dalxiis. Ali Ates, waxay yaqaanaan muhiimada maaddada waxayna yiraahdeen waxay muujinayaan dareenka lama huraanka ah.
Khudbadihii furitaanka kadib, Macalin Kuliyada Dalxiiska ee Jaamacada Erciyes. Nihat Çeşmeci iyo Taariikhyahan Artiste Xamdi Oktay waxay tababar siiyeen darawallada tagaasida.
13 ayaa ku xayiran Switzerland kun kun dalxiisayaal ah
Gaadiidka cusub ee eco-ga ayaa bilaabay adeegga Diyarbakir
Kayseri Gaadiidka Inc. 49 Waxay bixisaa Tababarka Gaadiidka Dadweynaha
Gaadiidka ka yimid Kayseri ilaa 267
Gaadiidka loo tababaray darawallada basaska dadweynaha ee Kayseri
Jidka tareenka ee loo yaqaan Coal Will Carry Tourists
Socdaalka Dalxiis ee Jamhuuriyadda Jamhuuriyda
Wonderland Eurasia 'Opening Factory'
Joojinta Gargaarka Taksiga Gargaarka Caadiga
Garci oo ka socota Gokcek Station Station Taxi ilaa Taxis
Laga soo bilaabo Melih Gökçek ilaa Gargaarka Gar
Gokcek, ayaa la kulmay wakiilada taksiyada
Dalxiis Dalxiis Dalxiis
Tababbarka Taksiga Dalxiis ee Dalxiisayaasha